Abenzi be-Servo Motor Magnet nabaphakeli | Ukufika
I-Servo motor magnet noma i-Neodymium magnet ye-servo motor inekhwalithi yayo yokusebenza ekhethekile nephezulu ukuhlangabezana nemfuneko yekhwalithi eqinile yama-servo motors. IServo motor ibhekisa kwimoto kagesi elawula ukusebenza kwezakhi zemishini ohlelweni lwe-servo. Iyidivayisi yokushintsha ijubane engaqondile yemoto esizayo. I-servo motor ingenza isilawuli sinembe isivinini nokunemba kwesimo, futhi ingaguqula isignali yamandla kagesi ibe yi-torque nejubane ukushayela into yokulawula. Ijubane le-rotor le-servo motor lilawulwa yisiginali yokufaka futhi lingasabela ngokushesha.
Kusukela igatsha lase-Indramat laseRexroth lethule ngokusemthethweni ngokusemthethweni i-MAC magnet unomphela i-AC servo motor and drive system embukisweni wezohwebo waseHannover ngonyaka we-1978, lokhu kukhomba ukuthi lesi sizukulwane esisha sobuchwepheshe be-AC servo singene esigabeni esisebenzayo. Maphakathi nasekupheleni kweminyaka yama-1980, inkampani ngayinye yayinochungechunge oluphelele lwemikhiqizo. Yonke imakethe ye-servo iphendukela kuzinhlelo ze-AC. Iningi lezinhlelo ze-servo kagesi ezisebenza kakhulu zisebenzisa uzibuthe ongaguquguquki we-AC servo motor, futhi umshayeli wokulawula usebenzisa kakhulu uhlelo lwe-digital position servo system ngokuma okusheshayo nokunembile. Kukhona abakhiqizi abajwayelekile abanjengo-Siemens, Kollmorgen, Panasonic, Yaskawa, njll.
Ngenxa yokusebenza okunembile kwemoto ye-servo, inesidingo esiqinile mayelana nokusebenza ngokunemba nokusebenza okuphezulu, okuxhomeke kakhulu ekhwalithi yamazibuthe we-Neodymium wama-servo motors. Ngenxa yobubanzi bezinto eziphakeme zikazibuthe, uzibuthe we-Neodymium wenza ama-servo motors enzeke ngesisindo esiphansi nosayizi omncane uma kuqhathaniswa nezinto zikazibuthe zendabuko, njengamazibuthe we-Ferrite, Alnico noma ama-SmCo.
Okomazibuthe be-servo motor, njengamanje i-Horizon Magnetics ikhiqiza ama-serial wamabanga aphezulu aphezulu wamagnet we-Neodymium, afana no-H, SH, UH, EH no-AH anezici ezintathu ezilandelayo:
1.High kwangaphakathi coercivity Hcj: phezulu> 35kOe (> 2785 kA / m) okwandisa uzibuthe ukumelana namandla kazibuthe bese i-servo motor ukuzinza kokusebenza
Ama-coefficients wokushisa aphindaphindiwe aphansi: aphansi kuya ku-α (Br) <-0.1% / ºC ne-β (Hcj) <-0.5% / ºC ekhulisa ukuzinza kwamazinga kazibuthe futhi iqinisekise ama-servo motors ukuthi asebenze ngokuzinza okuphezulu
Ukwehla kwesisindo esiphansi: phansi kuya ku-2 ~ 5mg / cm2 kusimo sokuhlola se-HAST: 130ºC, 95% RH, 2.7 ATM, izinsuku ezingama-20 okwandisa odonsa ukumelana nokugqwala ukunweba isikhathi sempilo yama-servo motors
Langaphambilini Elevator Magnet
Olandelayo: I-Pin Yemagnetic Push
I-Stepper Motor Magnet